Miverina any amin'ny Nosy Galapagos ny dia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Ekoatera » Miverina any amin'ny Nosy Galapagos ny dia
Tsy mahazo sidina iraisam-pirenena i Galapagos, midika izany fa misy sivana telo amin'ny fomba mahomby hampihenana ny mety hisian'ny viriosy miditra: seranam-piaramanidina iraisampirenena, seranam-piaramanidina Quito sy Guayaquil ary seranam-piaramanidina roa any Galapagos
Ny fiverenan'ny nosy Galapagos dia mety ho rafitra hamerenana indray ny indostrian'ny sambo
Ireo mpandeha mankany amin'ny Nosy Galapagos dia tsy maintsy mameno ny sata momba ny fahasalamana sy ny fampahalalana momba ny fifandraisana
Ny Nosy Galapagos dia namorona lamina ho an'ny dia tsara azo antoka izay mety ho ohatra harahina any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao
Vaovao tsara ho an'ny mpandeha: Tsy ny fitsangatsanganana rehetra no mijanona, ao anatin'izany ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay nahitana andalana vitsivitsy nanombohana ny asany tamin'ny Aogositra 2020 ary manohy manompo ireo vahiny hatramin'izay. Vaovao tsara kokoa ho an'ny mpandeha: Rehefa miasa am-pahazotoana ny indostrian'ny fitsangantsanganana sy fitsangantsanganana mba hisokatra indray amin'ny toerana feno, dia misy ny sambo fitsidihana lakana iray, ny Nosy Galapagos, izay namorona lamina ho an'ny dia tsara azo antoka izay mety ho ohatra harahina amin'ny faritra hafa amin'ny izao tontolo izao
Any amin'ny 600 kilaometatra miala ny morontsirak'i Pasifika any Ekoatera, ny valan-javaboary Nosy Galapagos, ny manampahefana ary ny orinasam-pitetezana dia mpisava lalana amin'ny famolavolana drafitra fihaonana misy fiantraikany ambany amin'ny tontolo voajanahary tamin'ny 1960. Raha sambo kely 70 eo ho eo no nitety ny nosy sy ny nosy kely mandrafitra ny nosy, dia sambo am-polony eo ho eo ihany izao no mandeha foana. Kely foana ireo sambo any amin'ny faritra, ary mpandeha latsaky ny 50 ny mpandeha. Sambo dimy ihany no voamarina ankehitriny fa mitondra mpandeha 100, ny ambony indrindra avelan'ny lalàna Galapagos henjana.
Noho ny haavon'ny endemisme avo lenta, ny karazany tsy manam-paharoa ary ny lanjan'ny tantara, ny 97% ny tany ao amin'ny nosy dia voaro amin'ny maha valam-pirenena - voalohany an'i Ekoatera - hatramin'ny 1959, raha ny tahirin-dranomasina kosa dia isan'ny lehibe indrindra manerantany. Raha ny tantara no jerena dia voafehy tsara ireo nosy mba hiarovana ny karazany sy ny tontolo iainan'izy ireo amin'ny karazany manafika sy ny fiantraikan'ny olombelona. Ny lalàna mifehy ny biosecurity dia natsangana fotsiny mba hampidirana COVID-19 miaraka amina fitandremana fitandremana mandritra ny taona lasa, hiantohana ny fiarovana ireo mpandeha sy ireo mpiasan'ny indostrian'ny dia ao amin'ny UNESCO World Heritage Site.
Ho fanampin'izany, tsy mahazo sidina iraisam-pirenena i Galapagos, midika izany fa misy sivana telo mahomby hampihenana ny mety hisian'ny viriosy miditra: seranam-piaramanidina iraisampirenena, seranam-piaramanidina Quito sy Guayaquil ary seranam-piaramanidina roa ao Galapagos. Ny mponina Galapagos ihany koa no andrana sy voadinika indrindra tany Ekoatera, miaraka amina programa fanaovana vaksiny mikendry ny hamindra ny ankamaroan'ny mponina mandritra ny volana ho avy.
Fepetra takiana ho an'ny Amerikanina mandeha any Ekoatera
sy ny Nosy Galapagos:
Ny zotram-piaramanidina dia hanamarina raha manana PCR ratsy ny mpandeha Covid-19 ny taratasy fanamarinana natao tao anatin'ny 10 andro taorian'ny nahatongavan'izy ireo tany Ekoatera talohan'ny nanombohany ny sidina. Ireo mpandeha tsy manana taratasy fanamarinana marina dia holavina tsy hiditra.
Ireo mpandeha dia tsy maintsy mameno ny fari-pahasalamana sy ny fifandraisana.
Rehefa tonga ny sidina any amin'ny seranam-piaramanidina any Ekoatera, ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia hanao fitsapana antigen tsy misy hatak'andro ho an'ireo mpandeha 14 taona no ho miakatra. Raha misy fitsapana antigen tsara dia takiana ny mitokana mandritra ny 10 andro any amin'ireo tobim-pitsaboana governemanta maimaimpoana. Ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana koa dia hanamarina ireo mpandeha ny soritr'aretina mifandraika amin'ny COVID-19 ary hanao fitsapana antigen, raha ilaina izany.
Firenena maromaro, anisan'izany i Etazonia, no mitaky ny fisian'ireo mpitsangatsangana mody mampiseho ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy natao tao anatin'ny andro teo.
Air France-KLM sy Airbus dia nanangana fitakiana fahalianana ho an'ny sampana hidrogen any amin'ny seranam-piaramanidina Paris